Ịghọ Uber Driver na Dubai - Careem na RTA Nduzi maka Ọrụ 👳
Na-eduzi ịghọ onye Uber Driver na Dubai & Driver Driver
Ofesi Job Vacancies na Dubai City
Nwanyị nwanyị Dubai - Chọta ọrụ na Middle East
Ịghọ Uber Driver na Dubai
Ịghọ Uber Driver na Dubai. Iji ghọọ Uber ọkwọ ụgbọala na Dubai. Ndị na-achọ Job ga-enwerịrị ndekọ akwọ ụgbọala dị ọcha. N'aka nke ọzọ, ịbụ onye ụlọ ọrụ limousine ma ọ bụ ọrụ ụgbọ ala na-arụ ọrụ n'ime Dubai. Ma mezuo obere oge ịchọrọ nke 21. Ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ilele obere vidiyo ọzụzụ. Akwụkwọ a chọrọ bụ ezigbo ikikere ịnya ụgbọ ala nke Dubai maka United Arab Emirates na IDE ma ọ bụ ihe akaebe nke ebe obibi. Nke a na-enyere onye ọkwọ ụgbọala aka inweta ego n'ụzọ dabara ha mma.
Kedu ka esi malite Uber na Dubai?
Nduzi Nduzi Iji Malite na Uber?
Nzọụkwụ No1 - Debanye n'Ịntanet na Uber
Naanị ịmalite ị chọrọ naanị adreesị ozi-e na ekwentị mkpanaaka !. Ọ dị mma, gwa ụlọ ọrụ Uber obere ihe banyere onwe gị na ahụmahụ ịkwọ ụgbọ ala, ụlọ ọrụ ahụ ga-amalitekwa.
🚕 Debanye ugbu a
Nzọụkwụ No2 -Imezie ihe ID gị na ụfọdụ ozi
Ka ị na-enyo enyo na ọ nwere ụfọdụ akwụkwọ ịchọrọ ịgbaso iji gaa n'ihu. Enwere akwụkwọ ole na ole ụlọ ọrụ uber kwesịrị ịhụ Tupu nyocha gị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkwọ ụgbọala na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi na United Arab Emirates:
Valid RTA Kaadị
Ị ga-enwerịrị ndebanye Emirates ID
Valid RTA Edenyere ụgbọ ala Mulkiya
Ị ga-enwerịrị foto profaịlụ ọkwọ ụgbọala ma zipụ ya na ụlọọrụ Uber.
Kwesịrị ịbụ ihu na-eche ihu, nke etinyere etinyere na ihu ihu ya na elu nke ubu, n'enweghị ugogbe anya anwụ
Ga-abụ foto naanị nke onye ọkwọ ụgbọ ala nke enweghị isiokwu ọ bụla na etiti ahụ, dị mma, ma na-elekwasị anya. Ọ pụghị ịbụ akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ foto ndị ọzọ e biri ebi.
Nzọụkwụ No3 - Get engine / petrol ala na njikere ịga ụgbọ!
Kedu ihe kacha mma ụgbọ ala maka gị? N'ezie ụgbọ ala injin na-efu. Ọzọkwa, Gbalịa hụ na ọ na-ezute Uber chọrọ na ụkpụrụ nke metụtara na United Arab Emirates.
Nwee ike ma cheta mgbe niile !. Na ị ga-emekwu dirham ma ọ bụrụ na ị na-emefu ego ị na-eji na ụgbọala na-akwụ ụgwọ na-efu.
Otú ọ dị, ee, ịnwere ike ịbanye ma ọ bụrụ na ịnweghị ugo mmụta ugbu a. Lelee anyị Uber ụgbọala ngwọta.
🚕 MGBE NDỊ MERE
Nzọụkwụ No4 - Mee ka akaụntụ gị rụọ ọrụ ma mee ego Uber!
Ugbu a, ọ bụrụ na ijiri soro ntuziaka anyi na Dubai wee wuchaa usoro niile dị n’elu. Ikwesiri inweta oru na Uber na Dubai. N'oge na-adịghị anya Uber gbanye akaụntụ gị ihe will ga-adị njikere ime ka akaụntụ gị rụọ ọtụtụ ikpe na-ewere 24h ruo 48h na ị ga-amalite n'ezie ịme dirham.
Olee otú ị ga-esi ghọọ Uber Driver na Dubai
Enwere ọtụtụ arụ ọrụ na Dubai. Maka mgbanwe na mmebe, Uber bụ nhọrọ kacha mma. Iji nweta Uber ọrụ na Dubai, gaa na ebe nrụọrụ weebụ Uber. Ịbanye dị mfe dị ka ịmebanye ndebanye aha n'ịntanetị. Ịghọ Uber Driver na Dubai ụfọdụ na-ewere oge. N'aka nke ọzọ, e nwere ọtụtụ awa ebe ị ga-eme obere ụgwọ ọrụ.
Mana ịkwesighi inwe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na ịnwere ike ịnya ụgbọ ala mgbe niile maka ụlọ ọrụ ọzọ dị ka tagzi Kareem na mpaghara Ọwara. Yabụ, ọ bụrụhaala na ị malitere inwe ahụmịhe will ga-ahụ ka esi eme ezigbo ego.
Kedu ka Uber si arụ ọrụ na Dubai?
I nwere ike ima ima ka esi eji Uber na Dubai. Otu aka ahụ ka ụwa ndị ọzọ, iji Uber, budata ngwa ahụ, chọọ maka ụgwọ njem gị, ma họrọ ụdị njem Uber na-aga na Dubai ịchọrọ. A na-akwụ ụgwọ site na ngwa ahụ ma bufee ya ozugbo. E nwere ọkwa Uber dị iche iche dị na Dubai - Nhọrọ onye ọrụ bụ ọrụ dị elu ma na-enye ụgbọala ndị dara oke ọnụego ọnụego dị elu; Ojii Uber nke bu oru Uber izizi; UberXL nke bụ maka ndị otu buru ibu ma ọ bụ naanị mkpa maka nnukwu ụgbọ. Nke a pụtara na Uber Dubai na-enye ọtụtụ ihe site na ọkọlọtọ na njem adịchaghị.
Uber dị 24 awa kwa ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu. Iji ngwa ahụ, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịrịọ Uber n'oge ọ bụla n'ụbọchị ma ọ bụ n'abalị. Ngwa ahụ ga-egosi onye na-agba ya ihe osise nke onye ọkwọ ụgbọala ha na nkọwa nke ụgbọ ahụ, hụ na nchekwa nke abụọ ahụ n'oge niile. Enwekwara ike ịgbaso onye ọkwọ ụgbọala ahụ ozugbo iji hụ mgbe ha ga-abata.
Ọnụ ego a na-akwụ otu tagzi na Dubai dị gburugburu 44 AED (Arab Emirates Dirham) maka 10 kilomita. Na Uber, nke a dị nso na 28 AED maka otu anya. Ọnụ uba Uber na Dubai bụ gburugburu 30-50 AED kwa awa.
Kedu otu esi ewere Uber, ọkwọ ụgbọala?
Ngwa ekwentị Uber na-eziga arịrịọ gị maka ibuga ndị ọkwọ ụgbọ ala mpaghara mpaghara. Otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọala ndị a wee nakwere nke ahụ ọrụ wee nara gị ebe ị na - aga. N'ihi usoro a, Uber enweghị ike iji gị ndị ọkwọ ụgbọala akpọrọ aha gị. Mgbe njem gị gasịrị, enwere nhọrọ ịkwụ onye ọkwọ ụgbọala gị ụgwọ site na ịnye nzaghachi na-enweghị aha. Uber nweziri ike iji ozi a iji jide n'aka na ọrụ ha dịgide n'ọkwa a tụrụ anya ya. Ịghọ onye Uber Driver na Dubai ọ bara uru.
Kedu ihe bụ UberXL?
Uber nwere ọtụtụ ọrụ. Otu n'ime ihe atụ bụ Uber XL. Nke a bụ ezigbo ọrụ dị iche iche na ụlọ ọrụ Uber. Uber XL bụ ọrụ ụgbọ ala na-adịghị akwụ ụgwọ na-enye gị ohere ịkwọ ụgbọala SUV na ụgbọala ndị ka ukwuu karịa ndị iwu.
Kedu ihe bụ UberXL? Ọ bụ ihe dị mfe mere nnukwu ụlọ ọrụ nwanne maka uber. Ya mere, ka gị na ụlọ ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ, ị ga-eso otu ìgwè mmadụ n'otu ụgbọ ala nke ahụ bụ n'ezie. UberXL ọ bụ naanị a ọzọ saa mbara na-agba ụdị nke ọrụ na i nwere ike inye uber ahịa.
Inwere ike inyere ndị mmadụ aka n’emeghị ego na-ere ọkụ n’akpa oghere, UberXL bụ ọrụ ụgbọ ala ị nwekwara ike ịnye. Mgbe ị na-arụ ọrụ na Uber XL'll ga-ewere ndị ahịa n'otu SUV ma ọ bụ minivan. Imirikiti ụgbọ ala ndị ahụ nwere ike dabara ndị 6-8 dịkarịa ala ka ọ dị ọ dị mma maka oriri ma ọ bụ nzukọ ezinụlọ.
Kedu ka ịbụ onye ọkwọ ụgbọala Uber?
Kemgbe mmalite ya na August 2013, Uber in United Arab Emirates esila ike gaa ike. Agbanye na ozi dị na ntanetị n'efu na-egosi na achọrọ Uber ka ọ bunye 30% karịa taxis ọkọlọtọ, data ndị ọzọ dịkwa na ntanetị na-atụ aro na ọnụego ụgwọ nke Uber na-akwụ ụgwọ kwekọrọ na ebe ndị ọzọ n'ụwa, ma dị ọnụ ala karịa 'nkịtị' tagis nke a bụ ihe Uber na-agbado usoro ahia ha, ma jiri ya mee ihe.
N'ihi ụkpụrụ ahụ na-ekwu na ndị ọkwọ ụgbọala Uber ga-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ limousine, ndị ọkwọ ụgbọala ga-ekerịta ọrụ ha na onye ọrụ ha yana Uber, nke pụtara na ha nwere ike ghara ime ihe ọ bụla ha nwere ike ịbụ na nke a agaghị adị. Nke a pụtakwara na ndị ọkwọ ụgbọala Uber na-abụkarị nyere nkwekọrịta ka ọ rụọ ọrụ dịka onye India, ma gbanwee gaa Uber n'oge oge. N'ezie, nke a pụtara na Uber abụghị nanị ego ha ga-atụ anya ya, na-eme ka ọ dịkwuo ụgwọ maka ndị ọkwọ ụgbọala niile.
N'adịghị ka ọrụ ụgbọ ala ọdịnala, ndị ọkwọ ụgbọala Uber agaghị akwụ ụgwọ Ugwo ụgwọ iji rụọ ọrụ, ọ dịghịkwa atụ anya ka ha rụọ ọrụ awa. Na Uber, ndị ọkwọ ụgbọala na-esetịpụ aka ha ma nwee ike, ya mere, na-arụ ọrụ ma ọ bụ dị ntakịrị ka ha na-achọ.
Malite Ịkwọ ụgbọala na Uber
Tee a: https://www.uber.com/drive/requirements/
Kedu ka esi ebu Uber na United Arab Emirates ?. Ụlọ ọrụ Uber na-enwe ụzọ dị mfe isi malite na ọrụ ndị dị ịtụnanya. Naanị na-abụ abụ na ebe nrụọrụ weebụ ha ma ị nwere ike ịga !.
Uber na Dubai bu ezigbo uzo ịbụ onye isi gị ma nwee ego na ahịa siri ike dịka UAE. Ọbụghị naanị na ị ga - enwe ọ butụ mana ọtụtụ ndị tozuru oke iji ya na Uber. Ha na-enwetakwa ego na uber na Dubai. Ọmụmaatụ, Ndị India na ndị Pakistan enwetala ego site n'ịrụ ọrụ na uber na Dubai.
N'ikwu eziokwu, ịkwesịrị ịmara nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi na Uber. Obodo ndị a bụ ebe dị ịtụnanya n'ihi na ọ fọrọ obere ka 24h ike iji kpata ego.
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka Uber ị kwesịrị ịnwa ịnweta ọrụ na
Careem Captain (Dubai)
Tee a: https://drive.careem.com/
Careem Captain ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ bara uru ile anya, ị nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala Uber nwere onye isi Careem.
1. Debanye aha gị na weebụsaịtị: Mgbe ahụ mezue ụdị ahụ n'elu mkpokọta ahụ, ọ dị mfe, tinyekwa ya ka ị bụrụ onye nlekọta Careem.
2. Mgbe ị nwetara oku ekwentị site na otu ha, mgbe ahụ, ị ​​ga-enwerịrị ọzụzụ dị mkpa. Mgbe ị tụlechara ọrụ ụlọ ọrụ ọkachamara gị na-akpọ gị maka ọzụzụ.
3. Ghaaru elu ma nweta ego na Dubai. Mgbe ọzụzụ zuru, ị nwere ike ịmalite inweta ego!.
Malite na Careem Captain taa!
Ụlọ ọrụ Talixo (Dubai)
Tee a: https://talixo.com/careers/
Akwụkwọ ụlọ ọrụ Talixo ugbu a bụ tagzi gị na Dubai. Nke a bụ ihe weebụsaịtị ha kwuru na ọ bụ eziokwu nkwupụta. Na Talixo ị nwere ike ịhọrọ taxi ịnya ụgbọ ala, klas akụ na ụba na ulo oru azu ahia ohere.
Isi ihe dị mma nke ụlọ ọrụ a bụ na nzukọ Talixo dị na obodo 949 gburugburu ụwa. Nke ahụ na-enyekwa gị ichebe mmalite n’ime ọrụ gị dị ka onye na-anya tagzi. Kedu ihe anyị bu n'uche site na nke ahụ? Onwere nnukwu nkwa na will ga enweta ego gi n’oge na n’iru ihe.
Taxi RTA (Dubai)
Tee a: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
Ọ dị mma, iji nweta ọrụ na RTA Taxi ị ga-arụ ọrụ obere ọrụ. RTA tagzi ọ bụ ụlọ ọrụ metụtara gọọmentị. Yabụ, na-arụ ọrụ ebe ahụ ọ dị mma ma ihe ọ bụla kwesịrị ịdị mma na ụgwọ ọrụ ma chekwaa ọrụ ga-enye ya.
Mana n'aka nke ọzọ, inweta ọrụ tagzi RTA ga-abụ ọrụ tara akpụ iji nweta. Ma dị ka ntuziaka expat - Dubai City Company team otu mgbe niile gbaa expats iji kpọọ ụlọ ọrụ oku na-arịọ ha maka ozi ndị ọzọ.
Ụlọ njem taxi (Dubai)
Tee a: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
Ọrụ ndị dị elu na-enye na ọrụ tagzi kachasị mma na United Arab Emirates. N’ezie, ịbụ onye ọkwọ ụgbọala Uber na Dubai abụghị otu ihe na Dubai Taxi. N'ebe nguzosi ike a, will ga-enweta ọrụ oge niile na n ’ọtụtụ oge ụgbọ ala dị ịtụnanya na-anya. Dubailọ ọrụ Dubai Taxi na-enye ụgbọ ala dịka Tesla na Mercedes n'ụgbọ agha ha. Yabụ, otu ihe ị kwesịrị ịmara: ụlọ ọrụ a bụ nkịta kachasị elu na egwuregwu nke ọrụ njem dịịrị onwe.
Ọ bụrụ n’inwee ahụmịhe na chauffeur na tagzi ịnya ụgbọ ala. Definitelykwesịrị ịkpọ ha oku ma ọ bụ lelee ozi emelitere na weebụsaịtị ha. Ruo ugbu a anyị maara nke ahụ ụlọ ọrụ na-akwụ ezigbo ezigbo ụgwọ maka ndị na-arụ ọrụ.
Otu okporo ụzọ ụgbọala okporo ụzọ
Tee a: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
Otu okporo ụzọ okporo ụzọ bụ Hiring na United Arab Emirates. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ nke nzukọ anyị na-abawanye. Ga-ekwesịrị ịgwa ụlọ ọrụ a okwu. Njikwa nke tagzi ụzọ na-ele anya iburu ndi isi n’ile ndi ozo.
The Companylọ ọrụ na-achọkarị ndị mbịarambịa mba ụwa ọhụrụ. Yabụ, ndị ọrụ azụmahịa nke mba niile nwere ike rụọ ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ tagzi na azụmahịa ha. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere oke agụụ na ntụkwasị obi maka inyere ndị mmadụ aka iru ebe ha n'oge. Biko lee anya na tagzi ụzọ oghere dị ugbu a na Dubai City.
Gbanwee Mgbanwe (Dubai)
Tee a: http://www.safetransme.com/index.html
Ọdi nma na oria google di nma ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eji nzukọ a. Companylọ ọrụ a na-ele anya ịme azụmahịa. Agbanyeghị, enweghị ụzọ ịchọta ngalaba ọrụ ọ bụla na weebụsaịtị ha. Mana, n’ozuzu ha, ekwesiri inye ha oku naanị jụọ ha ma ha nwere ọrụ ụfọdụ dị ka onye na-anya tagzi.
Azụ ụgbọala obodo (Dubai)
Tee a: http://www.citytaxi.ae
City Taxi bụ ụlọ ọrụ ochie. Dị Mfe n'ihi na E hiwere City Taxi AE n’afọ 1983. Ruo ọtụtụ afọ nke ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ọrụ dịka na-ebugara ndi mmadu ebe obula gaa Dubai na Abu Dhabi na mba ofesi. Companylọ ọrụ ahụ na-eji obere ụgbọala eme njem.
Ezigbo ihe dị mma maka ụlọ ọrụ a bụ na ha na-arụ ọrụ. I nwere ike ịga na webụsaịtị ha na tinye CV gị na weebụsaịtị webụsaịtị. Naanị leta ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ kpọọ ha na mmadụ. Ndị na-ahụ maka City Taxi ga-enwe obi ụtọ iji nyere gị aka inweta ọrụ dị ka onye na-anya tagzi na Dubai.
Ụgbọ njem ndị Arab (Dubai)
Tee a: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
Taxi Arabia adịghị ihe ọ bụla metụtara Beghọ onye Ọkwọ ụgbọ ala Uber na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi mana anyị etinye ụlọ ọrụ a na ndepụta anyị. N'ihi na anyị kwenyere na ọ ga-enyere gị aka iru ebumnuche gị nke ịchọta ọrụ na ahịa ọrụ jọgburu onwe ya na UAE.
Companylọ ọrụ a bụ ọgbakọ na-eto eto na UAE. N'oge a, ha bụ naanị ụlọ ọrụ na-ahụ maka inweta nnabata zuru oke maka ikike njem n'okporo ụzọ na United Arab Emirates. Arabia Taxi bụ ụlọ ọrụ tozuru oke inwe ụdị a onye nwere ike ịchọta ọrụ.
Ụgbọ ala ụgbọala (Dubai)
Tee a: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
Notlọ ọrụ a anaghị arụ ọrụ na Dubai. Kpoo ya ọdịnala nke ọdịnala ma na-agba mbọ na-aga n’ihu iwu niile na-etinye na United Arab Emirates. Isonye na nzukọ dị ka nke ahụ ga-enye gị ohere iru ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka ndu gi na asusu ala Arabic.
Azụmahịa Sharjah (Dubai)
Tee a: https://www.shjtaxi.ae/careers
Otu ụlọ ọrụ tagzi gbara 100% aha. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ a na-arụkwa ọrụ n'ime Dubai na Abu Dhabi. Sharjah companylọ ọrụ tagzi chọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala na Dubai na Abu Dhabi. Ma, UAE Light licence licence bụ ihe a chọrọ. N'aka nke ọzọ, onye nwere ikike ikikere GCC Light nwere ike itinye n'ọrụ. Yabụ, jide n'aka na ị ga-enwe nke ahụ n'aka gị.
Companylọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ nke ọma, ị nwere ike irite ego AED. 3,000 / - ka AED.10,000 / - n'ime ọnwa ọ bụla ị na-arụ ọrụ karịa 8h kwa ụbọchị. Na-ekwukarị, na ụlọ ọrụ ndị dị ka nke a ị nwere ike ịnwe ha. Biko lee anya na ebe nrụọrụ weebụ Bekee ha na Tinye naanị ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịrụ ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala.
Ọkwọ ụgbọala (Dubai)
Tee a: http://thedriver.ae/contact-us.html
Companylọ ọrụ ọkwọ ụgbọala nwere afọ nke ọhụụ na United Arab Emirates na-ebugharị. Companylọ ọrụ a na - enye ndị UAE ọhaneze ozi na cha cha pụrụiche. Yabụ, dabere na nkọwa ahụ ịkwesịrị itinye akwụkwọ maka ha na ha.
Otu ụlọ ọrụ yiri ụlọ ọrụ uber na Dubai. dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịkpọ ụlọ ọrụ ọkwọ ụgbọ ala. Na izugbe na-ekwu, ha ga-ezitere gị ebe ị ga-aga. Edebara aha ha n'akwụkwọ na Rozọ okporo ụzọ Dubai na Njikwa Njikwa (RTA). Yabụ, 100% dị mfe na Chekwaa ụlọ ọrụ ebe ị ga - achọta ọrụ akwụ ụgwọ dị mma.
Tawasul Taxi (Dubai)
Tee a: http://www.tawasul.ae/
Tawasul Taxi bụ ụlọ ọrụ maka ndị na-asụ asụsụ Arabik. Kaosinadị, can nwere ike ịchọta ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ. Companylọ ọrụ a na-enye nhọrọ ọkọlọtọ ma ịchọrọ inwe ikikere. Can nwere ike ịgwa ha maka inye gị ụgbọ ala ọhụrụ. Ma n'okwu ahụ, ị ga-akpata obere ego ị nwere ike ịtụ anya. Agbanyeghị, jiri ụgbọ ala gị, ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ.
Indigo Ịgbazinye ụgbọala (Dubai)
Tee a: http://indigorentacar.com/contact
Ezigbo ụlọ ọrụ ịmalite ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara ọrụ na Dubai. Indigo mgbazinye ụgbọ ala na-eme nke ọma na ọrụ ndị ahịa. Nke ahụ bụ eziokwu. Indigo ịgbazite ụkpụrụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala dị mfe, mee ka ndị ahịa gị nwee ọ andụ ma mee ka ndị ọrụ anyị nwee obi ụtọ. Yabụ, maa dị ka nke a ezigbo ụlọ ọrụ na United Arab Emirates.
Emere ihe niile ụlọ ọrụ Indigo na-eme maka ịgbagharị na ndị ahịa. N'ezie, ebumnuche ndị a bụ ụzọ ziri ezi iji mee azụmahịa. Ndị ọzọ karịa nke ahụ Indigo gbazite ụlọ ọrụ ụgbọ ala na UAE na-elekwasị anya na nhazi na-aga n'ihu na ahịa ụgbọala tagzi Dubai.
City 555 Luxury Transport LLC (Dubai)
Tee a: http://city555luxury.com/about-us/
The City 555 Luxury Transport LLC Nwere otu weebụsaịtị kachasị mma. Ndi otu a na aru oru na 2007. Na-ekwukarị, ọ bụ mmega bụ isi bụ njem ụgbọ ala ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Ndị mmadụ na-enye iwu maka ọrụ ha kachasị site na njem ndị ọbịa na nkwari akụ. Ọzọkwa, nnukwu ụlọ ahịa na ebe a na-ere nri na-eburu UAE niile.
Companylọ ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na UAE. Yabụ, ịchọta ọrụ ga-atọ ụtọ ma nwee nnukwu uru maka ndị ọbịa ọ bụla si mba ọzọ ma ọ bụ maka ụmụ amaala obodo si Emirates.
Njikọ Onye Njikọ (Dubai)
Tee a: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
Limousine, Sportsgbọ egwuregwu Egwuregwu na ụgbọala ndị dị oke ọnụ. Ihe a niile bụ nke chauffeur ụlọ ọrụ na Dubai. Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ ga - abụrịrị ndị ọkachamara na - akwọ ụgbọala. Companylọ ọrụ ahụ na-anya isi n'inye ndị ahịa ya ọrụ pụrụ iche. Yabụ, ọ bara uru ị kpọọ ha ma ọ bụ naanị zitere ha email na ọrụ ọrụ.
Lọ ọrụ a na-enye ọtụtụ ọrụ. Ma ndị ahịa ha achọrọ ụgbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Dubai. Ma ọ bụ ọbụna a nzukọ azụmahịa na otu n'ime ụlọ nkwari akụ Abu Dhabi. Ọzọkwa, nzukọ ọmụmụ ihe ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ wellụ mara mma, ụlọ ọrụ a na-enyere gị aka izu ike n'ime limousine ha ga-esoro gị wee banye n'enweghị nsogbu.
Personal Limousine (Dubai)
Tee a: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
Companylọ ọrụ ọzọ dị na ndepụta anyị bụ ụlọ ọrụ Private Limousine dị na Dubai. Nkeonwe Limousine UAE nzukọ na-ahụ maka ọhụụ nke Dubai. Egosiwo ọrụ mbu nile n’ime afo gara aga. Yabụ, na-ekwu n'ozuzu, iso ndị ụlọ ọrụ VIP na-arụ ọrụ bụ ọkwa kachasị elu.
Mgbe ị na - arụ ọrụ na ụlọ ọrụ limousine onwe gị. Ọtụtụ n'ime ndị ọkwọ ụgbọala ga-enye ndị ọrụ chauffeed naanị na Dubai na Abu Dhabi. Ụlọ ọrụ na-enye VIP ndị ahịa ya ihe karịrị afọ iri ugbu a.
Royal Smart Limousine (Dubai)
Tee a: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
Withlọ ọrụ nwere BMW Series 7 na Lexus Es350. Otu ụlọ ọrụ na-eriju afọ n'ezie na ahịa njem okomoko. Smartlọ ọrụ Royal Smart Limousine bụ ezi nhọrọ ka ị rụọ ọrụ na njem okomoko dị okomoko.
Ụlọ ọrụ a dị ịtụnanya bụ otu n'ime ndị ụlọ ọrụ Rashid Al Jabri na mpaghara Gulf. Ụlọ ọrụ ahụ tọrọ ntọala na 2002 site n'aka Rashid Al Jabri. Site na mgbe ahụ, ha na-akwụ ụgwọ dị ukwuu nke ndị ọrụ.
Ezigbo ụlọ ọrụ toro ọrụ gị na ahụmịhe nke gị n'ahịa njem okomoko. Nzukọ a bụ ezigbo ntụkwasị obi, chekwaa ịrụ ọrụ. Na kwa ngwa ngwa dị maka iku ndị ọrụ ụgbọ njem ọtụtụ ndị ọzọ. N'ezie, ụlọ ọrụ ndị ahụ ka na-eto ngwa ngwa. Ọ na - eji obodo ndị na - eme obodo na mba ofesi na - arụ ọrụ.
Wadi Swat Transport (Dubai)
Tee a: https://www.swattransport.ae/
Ezi ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịnweta ọrụ. Wadi Swat Transport ụlọ ọrụ abụghị naanị ụgbọ ala na-azụ ahịa. Ha na-ahazi iji nweta ndị njem ma soro ha na-aga na obere ọgbọ.
Transportgbọ njem Wadi bụ otu n'ime ndị azụmahịa na-ebute mgbazinye ụgbọ ala na Dubai na Abu Dhabi. Ị nwere ike soro nzukọ a rụọ ọrụ ma kwọta ụgbọ ala ma ọ bụ nke obere. Mana ụlọ ọrụ a na-akwụ ụgwọ na UAE. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala na Sharjah, Dubai na Abu Dhabi, can nwere ike itinye akwụkwọ maka ọrụ na ụlọ ọrụ a.
Limo Car mgbazinye (Dubai)
Tee a: https://www.limoinuae.com/contact
Imolọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala Limo nwere ọrụ dị elu. Companylọ ọrụ ahụ na-akwụ ndị mbịambịa nọ na Dubai ọrụ. Xus ga-enwe Lexus-Toyota na ọtụtụ ihe ndị ọzọ !. Companylọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ nwere ezigbo mmasị na ị ga-akpọ ha oku. Thezọ kachasị mma bụ nke ziri ezi nanị ịjụ ha gbasara ohere ma mee ka ha di ọsọ ọsọ.
Osimiri Orange (Dubai)
Tee a: https://orangeauto.ae/contact-us/
Map Google na-eme ka ụlọ ọrụ na-akpaaka mmanụma. Ị nwere ike ịlele onwe gị nyochaa banyere akpaaka mmanụma n'ime google profaịlụma ahia m. Otu ụlọ ọrụ na-ekwukarị na-aga nke ọma na UAE. Companieslọ ọrụ na-ebugharị njem dị ka nke a bụ ezigbo ndị asọmpi nye Uber na United Arab Emirates. Ha abụghị ndị ọrụ ụgbọ ala na-ahụ maka ụgbọ ala mana bara uru itinye akwụkwọ maka ọrụ.
Echefula banyere Uber riri (Dubai)
Tee a: https://uber.com/drive/delivery/
Uber rie ya a iche iche nke Uber Driver ọrụ na Dubai. Ị nwere ike ịrụ ọrụ maka ụdị ígwè ụlọ oriri na ọṅụṅụ maka ihe atụ Mc.Donald si ma ọ bụ Pizza Hut ma nyefee ndị agụụ na-agụ nri mgbe ị ga-eme ezigbo ego.
Iji nweta ụdị ọrụ a ịkwesighi ịnweta ikikere ịkwọ ụgbọala !. Maka na i nwere ike ime nke ahụ na obere ọgba tum tum ma ọ bụ ọbụna n'ụgbọ ịnyịnya ma ị ga-adaba adaba mgbe ọnwa ole na ole gafere ebe ahụ !. Ya mere, ọ bụ ụzọ ọzọ dị mfe iji ghọọ Uber Driver na Dubai.
Ndụ Car mgbazinye (International)
Tee a: https://www.olacabs.com/careers
Ola bụ ngwa mgbazinye ụgbọ ala ma ugbu a nnukwu azụmahịa. Thelọ ọrụ ahụ kwenyere na mmata nke ahịa njem dị ezigbo mkpa. Onye na-ahụ maka ụgbọ ala Ola gbara n'ụlọ na-eme ka ebumnuche na ụkpụrụ dị ukwuu nke Ola nwee. Karịsịa ụlọ ọrụ ahụ bụ ijikwa ezigbo ahia na UK na India. Mgbazinye ụgbọ ala Ola gbara ndị ọrụ ya niile ume ka ha mewe njem njem kacha mma.
Dị ka otu n’ime ụlọ ọrụ ụwa na-ekerịta ịnya ụgbọ elu na ụlọ ọrụ njem njem nkeonwe. Ịgbazite ụgbọ ala Ola na-anya isi ịbụ onye ọchụnta ego, nnwale na azụmaahịa zuru ụwa ọnụ!.
Tee a: https://www.gocatch.com/
Golọ ọrụ GoCatch bụ ọrụ ịkwọ ụgbọ ala Australia kachasị ụgwọ. Gị na ụlọ ọrụ a, ọ bụ ọtụtụ nhọrọ ị ga - akwọ ụgbọala gị. Dịka ọmụmaatụ ọkwọ ụgbọala akụ na ụba yana ọkwọ ụgbọ ala tagzi ma ọ bụ ọbụna ọkwọ ụgbọ ala. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ a na- na-eweta ezigbo mmekọ. Ọ bụrụ na ịnwere ụgbọ nke gị, ị nwere ike ịgbazite ndị ọrụ na ụgbọ.
Weebụsaịtị ụlọ ọrụ GoCatch nwere ọdụ ụgbọ mmiri kachasi elu nke ndị ọkwọ ụgbọ ala ịdebanye aha na tagzi na Australia. Na ụlọ ọrụ bara uru n'ezie iji nweta ọrụ. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ụdị ọrụ dị na Uber Internationally. Ikwesiri itinye aka na webụsaịtị Go Catch na Australia.
Kapten ọkwọ ụgbọala (International)
Tee a: https://www.kapten.com/
Lọ ọrụ Kapten na-arụ ọrụ ruo ugbu a na mba ole na ole. Iji maa atụ, you nwere ike ịchọta ha na France Paris, Lyon na Cannes. Ọzọkwa, Sunshine Portugal na Lisbon na Switzerland na Geneva. Nke a ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ahịa asọmpi.
A zụrụ ndị ọkwọ ụgbọala ha na ọrụ ha na-eduzi. Iji nye ndi ahia ihe nlere kachasi nma maka ndi isi oru. Mgbe mụ na ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ ọrụ ndị ahịa na-aghọ isi ihe maka ọrụ gị.
Ọrụ ndị ahịa na mpaghara, na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọwa ahịa.
Tee a: https://gett.com
Gett Taxi bụ ụlọ ọrụ na - eto eto, nnukwu ahịa maka ha bụ Israel, Russia, United Kingdom na New York. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ a abụghị naanị ebe ndị a, n'ihi na ha na-achọ itolita n'ọdịnihu. Yabụ, ị ga - akpachapụ anya jikwaa itinye na ngalaba nrụọrụ ọrụ ọrụ ha ma nwee nlele ka ha mere mmelite ọhụụ ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Tee a: https://cabify.com/en/drivers
Mbanye na Cabify. Nnukwu ụlọ ọrụ mara mma gburugburu ụwa !.
Companylọ ọrụ a bụ nhọrọ mbụ maka ego ụgbọ, nke mbụ maka nchekwa. Ma oke ụlọ ọrụ na-ewu ewu bụ ndị na-ewe ndị ọrụ mba ọzọ ụgwọ. You nwere ike inye aka soro ndị mmadụ gbagoro n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ gaa nzukọ ọrụ wee nwee ego n'akụkụ.
Inweta ego n ’azụmaahịa a na-ekwu bụ inyere ndị mmadụ aka ịbanye ọrụ ma ọ bụ ịlaghachi ụlọ. Ọrụ nzuzo bụ maka ndị ọrụ, ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-aga ime. Onye ọ bụla nwere ike itinye akwụkwọ na ịkpata ego.
Workingrụ ọrụ na ndị ọrụ Cabify maara nke ọma na azụmahịa na-eme njem maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche ma na-eme ka ụlọ ọrụ na ọkwa ahụt ga-abụrụ gị uru.
Tee a: https://www.ingogo.com.au/driver
Kpọtụrụ ya na ọ nwere ike ijikwa gị kaadị nchịkọta kalịnda dị egwu nke na-enyere gị aka ịchịkọta na ntinye akwụkwọ naanị ruo 48 awa n'ihu ka i wee nwee ike ịhazi ụbọchị gị na ebe ahụ. Ị nwere ike ịnwe iwu ndị ọzọ site na ndị ọrụ azụmahịa yana yana ndị ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ ka ukwuu.
Ụlọ ọrụ ahụ si Australia ma ọtụtụ ebe a na-akpọ na ndị ezigbo mmadụ ga-enyere gị aka. Ya mere, ị ga-atụle ụlọ ọrụ Ingogo ma malite
na-akwado ebe dị na Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane na Perth. Anyị nwere olileanya na ị ga-achọ ọrụ ha.
Tee a: https://www.itaxi.pl
Thislọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ Polish kachasị ewu ewu maka ndị ọkwọ ụgbọala. Nwere ike ịchọta ezigbo ụlọ ọrụ na Poland dị ka akụ na ụba na-eto eto ugbu a. iTaxi bụ free na mfe iji ngwa mkpanaaka na Poland. Companylọ ọrụ a na-ahapụ gị ka ị rụọ ọrụ maka ha na Poland. Agbanyeghị, ị ga-asụ asụsụ bekee.
Ụlọ ọrụ iTaxi bụ ihe kachasị ewu ewu na Poland ma na-arụ ọrụ na obodo ukwu niile na-enye Krakow na Warsaw ebe ọtụtụ n'ime ndị mmadụ maara ndị mba ọzọ na asụsụ Bekee.
Companylọ ọrụ a bụ naanị ụlọ ọrụ nke ga - enye gị nlekọta iji ma ị ga - eme ego na otu a. Njikọta ejikọtara ndị ọrụ naanị ha na ndị ọkwọ ụgbọ ala tụkwasịrị obi kwenyesiri ike na ahịa njem polish. I nwere ike ijide onwe gị ma mee ihe gị mgbe ị na-eru ebe ị na-aga. Inweta ego na Poland ma zigara nke ahụ ezinụlọ na mba ofesi.
Mbanye na Lyft (International)
Tee a: https://www.lyft.com/driver
Lyft bụ ụlọ ọrụ America ma nwee mmasị na United States na Canada. Otú ọ dị, ọ bụghị nanị na ụlọ ọrụ a agaghị agafe n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa.
N'aka ọ nwere usoro dị mma maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ha yana ọ dị mma nzukọ ga-arụ ọrụ mgbe ha kwagara Dubai City. Ruo ugbu a anyị maara na ụlọ ọrụ lyft na-achọ ịkwaga UAE mana ụlọ ọrụ ahụ ekwenyebeghị ụbọchị ọ bụla.
Napụtanụ nnwere onwe n'ihe niile ị na-eme, ịhapụ ọrụ gị ka ọ dị mma ma dịkwa mma. Ideasme echiche na-emebi ala ma bido imeputa ihe ọhụrụ na ego na-aga n’ihu na US na Canada na-eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ n’ezie.
Taxi LeCab (International)
Tee a: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
Lecab Taxi ọ bụ ụlọ ọrụ France dị ka Uber na Dubai. Ụlọ ọrụ LeCab bụ ọrụ na-eduzi ọkwọ ụgbọala onwe onye Parisis naanị maka ndị nwere ike ibi na Paris nanị. Ya mere, LeCab kere ọrụ na onye Paris ọ bụla chọrọ iji: nke ọma, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ọnụ ọnụ.
E hiwere ụlọ ọrụ a na 2012 ma kemgbe ahụ, e mepụtara ụlọ ọrụ ahụ n'echiche ole na ole dị mfe na-enyere ndị mmadụ aka iji ọrụ dịka tagzi na uber. LeCab na-enye Paris ihe ozo maka takisi na ugbo ala nke onwe. Na na-eto n’ike na asusu bekee.
Tee a: http://www.bitaksi.com/en/
Ọ dị mfe ịnya ịnya, Bi Taksi ọ bụ ụlọ ọrụ nke mmepe n'ọdịnihu. Companylọ ọrụ a bụ ọrụ tagzi kachasị mma na Istanbul na Ankara na Turkey. N’agbanyeghi ebe ino, inwere ike itinye ma obu obia na abia na Turkey ma nwee ego na BiTaksi.
Na ụlọ ọrụ dị ka nke a, na-ekwu okwu n'ozuzu, ị nwere ike ịrịọ ọtụtụ ozi ndị ọzọ ma lelee ka ọ na-abata ezigbo email na ọrụ a na-enye. Ndị ahịa gị na-enwe ike iji kaadi ma ọ bụ ego kwụọ ụgwọ. Companylọ ọrụ ahụ na-ewerekwa ndị ahịa nwere nkwarụ, ị ga - enwe ike inweta ọtụtụ ego karịa.
Taxi Didi (International)
Tee a: http://talent.didiglobal.com/
Didi na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mba, Australia, Brazil, China yana Japan na Mexico. Yabụ, nke a bara uru ọgbakọ iji nwee anya. Ha na-achọ ndị njikwa nwere ahụmahụ, ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum na Interns.
Didi taxi bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-ebu ụgbọ njem maka njem. Kwesiri ilele ohere ha anya n'ihi enwere ọtụtụ ọrụ nwere mmasị na-enye.
Tee a: https://gettransfer.com/en/carrier/new
Companylọ ọrụ a na - akpụgharị ọfịs ha ugbu a ịmalite ọrụ na Dubai na Abu Dhabi. Yabụ, n'eziokwu, ịkwesịrị ileba anya na weebụsaịtị ha. Anyị nwere olile anya na ụlọ ọrụ a ga-anọ na Dubai n'oge na-adịghị anya, yabụ mee ka ngwa gị meghee ya na gettransfer.com.
Ụlọ ọrụ ahụ ga-adị nnọọ ka Ịghọ Uber Driver na Dubai ị ga-anakọta ozi ahụ ma wepụta ngwá ahịa ma ọ bụ onye nkịtị gaa ebe ị họọrọ.
Mee ka ndị ọrụ na-ebufe nghọta iji ghọta uru ọpụpụ-ndọrọndọrọ, na-arụsi ọrụ ike na oke gbasara azụmahịa njem njem nkeonwe. Yabụ, Nweta Transfer.com enyere gị aka n'eziokwu ị na-arụ ọrụ iji rụpụta isi ihe ma wuo ngagharị maka ijeri mmadụ.
Mfe dị mfe (International)
Tee a: http://www.easytaxi.com/
Easy Taxi bụ ihe ndị ọzọ Columbia, Argentina na Mexico ụlọ ọrụ metụtara. Ma, ọ bara uru ka ị lelee ibe ha. Naanị ụlọ ọrụ a nwere ike imepe ụlọ ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi n'afọ ndị na-eso ya ma kwaga ahịa Middle East.
Lelee nhọrọ ha, onye maara ha nwere ike inwe ụfọdụ ọrụ maka ndị ọrụ nwere ọrụ gburugburu ụwa. Nwekwara ike nwee mmasị ịmalite ịrụ ọrụ na mba ofesi maka Easy Taxi.
Na-agbazi ụgbọala (International)
Tee a: https://grab.careers/
Ezigbo ụlọ ọrụ! Nzukọ a na-akwụ ụgwọ ịnya ụgbọ ala karịrị akari ihe ndị a na-eji abanye ụgbọ elu Southeast Asia. Companylọ ọrụ ahụ bụ azụmahịa dị n'ọtụtụ nwere nnukwu itinye ego. Companylọ ọrụ ahụ na-eji sistemụ data kacha ọhụrụ na teknụzụ kachasị elu iji melite ihe niile site na njem gaa na ịkwụ ụgwọ na ngwa agha gafee Ebe Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia.
Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụkọ ọrụ na ọrụ gọọmentị na usoro. Na ndị ọkwọ ụgbọala ha, ndị njem na ndị ọrụ ebere nwere obi ụtọ. Ihe niile yiri ka hà dị mma iji rụọ ọrụ obi ụtọ na ụlọ ọrụ a.
Ntughari ugbo ala iji kpughee ikike nke mpaghara mpaghara Eshia site n'inyere ndị mmadụ aka Ịghọ Uber Driver na Dubai (ụdị) ịnye ọrụ.
Ha na-edozi nsogbu ndị na-edozi ọganihu mmadụ karịrị akarị. Ọ bụrụ na ị na-ekerịta ọhụụ ụlọ ọrụ maka ịnya ụgbọ ala Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia itinye isonyere ndi otu ha taa.
Ụlọ ọrụ na-atụ ụtụ isi (International)
Tee a: https://careers.taxify.eu/
Taxify bụ ụlọ ọrụ nke abụọ mgbe ị gachara uber. Ifylọ ọrụ taxify ọ bụ ezigbo asọmpi maka Uber. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ mmadụ na-eji ụlọ ọrụ a gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na anyị na-ewere onye nhazi a, anyị ga-eji ya atụnyere ụlọ ọrụ Uber. N’ezie ị ga - enwe ezigbo ọgbakọ na - eto eto ebe inwere ike inweta oru na United Arab Emirates. N'oge a, ụlọ ọrụ a nwere ntanetị karịa.
Echiche ozo di nma banyere Ulo oru a na ihea i dighi eji ego kaadi obula ma oburu na inwereghi ugwo ahia obula ikwuwa okwu, gakwa n’ihu drive na and gba and na and ga pay ugwo. Yabụ ọ bụrụ na atụnyere ụlọ ọrụ a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ tagzi anyị ga-ekwu nke a bụ n'ezie ezigbo ebe ịmalite ọrụ na.
Companylọ ọrụ a dabere na mba ndị European Union na Estonia ha nwere isi ha ebe ahụ. Mana ọ bụrụ na anyị were ha, ha na-arụ ọrụ mba ụwa na India United States of America Canada na ọtụtụ mba na European Union. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na mba ofesi ụlọ ọrụ a bụ maa ụzọ amamihe iji nweta ọrụ.
Tupu I Gaa? - Demerit Points ke Dubai!
Na Dubai, ihe ndị na-ezipụ ihe na-egosi na ị na-akwọ ụgbọala ịkwọ ụgbọ mmiri ị na-agba n'ụgbọrụ ị na-ebugharị. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịghọ onye ọkwọ ụgbọala Uber, ị ga-achọ ịtụle ya otu esi eleba anya na otutu ihe i nwere. Enwere ike ime nke a site na ịlele akwụkwọ gị ma ọ bụ ịkpọtụrụ okporo ụzọ na okporo ụzọ ndị na-enye ikikere ịkwọ ụgbọala. Ịghọ onye Uber Driver na Dubai na ụlọ ọrụ anyị dị mfe.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ a ezigbo ọrụ. Maka na ịchọta ohere ọkwọ ụgbọala. Ị kwesịrị lelee ọrụ ọrụ mpaghara. Site n'ebe ahụ nweta ọrụ zuru oke maka ndị ọkwọ ụgbọala. Jisie ike.
Olileanya na ị ga-ahụ ọrụ ịkwọ ụgbọala na Dubai
Otú ọ dị, ugbu a anyị na-anakọta maka Driver Job na UAE
Chọta a Job na Dubai na ụlọ ọrụ anyị ihe ijuanya ị nwere ike ịhụ ọrụ nrọ ahụ n'ụzọ dị ngwa site na ịnyeghachi ihe mmalite na ụlọ ọrụ anyị.
Naanị bulite ihe omume ebe a ma malite ọhụrụ Ọkwọ ụgbọala Job na Dubai.
Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu Na Ụwa! - Ụlọ ọrụ Dubai City.
WhatsApp ngwa ngwa
WhatsApp ngwa ngwa!
Ugbu a: Dobe nọmba ekwentị gị na Dubai Community 100% n'efu!
* Dobe ekwentị gị na Dubai
A ga-eziga nọmba WhatsApp gị Live na weebụsaịtị anyị!
Kedu ihe kpatara ị ga - eji chọọ itinye nọmba Nọmba WhatsApp?*
Aha mgbasa ozi WhatsApp:*
Free - Ziga nọmba WhatsApp